हिउँमा गड्याङ-गड्याङ हिँड्दै, राष्ट्रिय गीत गाउँदै केटु शिखर (भिडिओ) :: Setopati
हिउँमा गड्याङ-गड्याङ हिँड्दै, राष्ट्रिय गीत गाउँदै केटु शिखर (भिडिओ)
निशा भण्डारी काठमाडौं, माघ १६
विवेक राई काठमाडौं, माघ १६
यही माघ ३ गते दस जना नेपालीको आरोही टोलीले हिउँदयाममा पहिलोपटक माउन्ट केटु शिखर पुगेर कीर्तिमान बनाए। विश्वकै दोस्रो अग्लो केटु शिखरमा हिउँदमा यसअघि कसैले पाइला टेक्न सकेका थिएनन्।
अब यो कीर्तिमान दस नेपाली आरोहीको नाममा दर्ज भएको छ। यसमा निर्मल पुर्जा, मिङमा डेभिड शेर्पा, मिङमा जी शेर्पा, तेन्जी शेर्पा, गेल्जे शेर्पा, दावा तेम्बा शेर्पा, पेमछिरी शेर्पा, किलुपेम्बा शेर्पा, दावा तेन्जिङ शेर्पा र सोना शेर्पा छन्।
टोलीको नेतृत्व गरेका निर्मल पुर्जा उर्फ 'निम्स दाइ' ले यो कीर्तिमान अर्को वर्ष बनाउने सोच बनाएका थिए। तर यही वर्ष ४० जनाभन्दा बढी विदेशी केटु आरोहण गर्न जाँदैछन् भन्ने सुइँको उनले पाए। त्यसपछि उनले योजना बदलेर यही वर्ष जाने निर्णय लिएको बताए।
आरोहणपछि नेपाल फर्किएका पुर्जाले बुधबार सेतोपाटीसँगको भेटमा भने, 'खासमा अर्को वर्ष जाने योजना थियो। अर्को वर्ष गएको भने धेरै प्रायोजक आउनेवाला थिए। तर ४० जनाभन्दा बढी विदेशी जाने खबर पाइयो। त्यसैले जसरी पनि देशका लागि गर्नुपर्छ भनेर केटुका लागि हिँड्यौं।'
पुर्जाले यो सबै योजना जम्मा दुई महिनामा तय गरेका थिए। जबकी केटु आरोहण गर्न जानेले दुई-तीन वर्षअगाडि नै योजना बनाउँछन्। कतै यो कीर्तिमान विदेशीको नाममा पो हुने हो कि भनेर पुर्जा भने निदाउन सकेनन्। दिमागमा सबै योजनाको खाका बुने र टिमका सदस्यलाई सुनाए।
अलि हक्की र साहसी पुर्जाले यो कुरा सुनाउनेबित्तिकै टिमका सदस्य मञ्जुर हुने भइहाले। यसअघि पनि पुर्जाले 'प्रोजेक्ट पोसिबल' बाट सात महिनामै आठ हजार मिटर अग्ला विश्वका १४ हिमाल चढेर कीर्तिमान बनाएका थिए।
टिमका अर्का सदस्य मिङमा डेभिड शेर्पा भन्छन्, 'निम्स दाइले फोन गरेर मिङमा तिमी एकचोटि सोच त, हामी विन्टर केटु जाने भन्नुभयो। सुरूमा अलि अलमल पनि भएको थियो। तर जाने नै निर्णय भयो।'
पुर्जासहित ६ जनाको टोली केटु आरोहणका लागि पुस ३ गते पाकिस्तान हिँडे। उनको टोलीसँगै यो कीर्तिमान बनाउन नेपालकै अरू दुइटा टोली पनि पाकिस्तानका लागि हिँड्दै थिए। जसमा 'इम्याजिन नेपाल' बाट तीन जना र 'सेभेन समिट' बाट एक जना थिए।
पुर्जाको छ जनाको टोली शिखरका लागि भनेर पुस ६ गते स्कार्दियोबाट आरोहण सुरू गरे। चार दिनमा आधार शिविर पुगे। यो यहाँ पुग्न लाग्नेभन्दा निकै छोटो समय हो। पुर्जा भन्छन्, 'लगभग ८ दिन लाग्छ। हामी यसपटक चार दिनमै पुग्यौं।'
मिङमा डेभिड शेर्पा। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
आधार शिविर पुगेर त्यहाँ पनि उनीहरूले धेरै समय बिताएनन्। भोलिपल्टै क्याम्प-१, क्याम्प-२ र क्याम्प-३ बनाउन हिँडे। तर क्याम्प-३ बाट झर्ने क्रममा क्याम्प-२ का सबै सामान हावाले उडाइदियो। त्यसपछि फेरि क्याम्प खडा गरेर उनीहरू आधार शिविर झरे।
आधार शिविरमा नेपालबाटै गएका दुई टोलीसँग भेट भयो। तीनवटै टोलीबीच कुराकानी भयो। त्यही क्रममा उनीहरूले एकैचोटि शिखर चुम्ने सल्लाह गरे। छुट्टाछुट्टै कीर्तिमान बनाउन गएका तीन टोली त्यसपछि एकैठाउँमा गोलवद्ध भए।
पुर्जाले भने, 'यो चाहिँ देशका लागि हो भन्ने ठान्यौं। टिम छुट्टिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा मिलेर गरौं भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि एकैचोटि दस जना शिखरतिर लम्कियौं।'
तर जब उनीहरू मिलेर शिखरतिर उक्लिरहेका थिए, पछिपछि विदेशी आरोहीले पनि पछ्याइरहेका थिए। त्यसैले उनीहरूले पाइला अलि छिटोछिटो बढाए।
'हाम्रो टोलीलाई कसैले भेट्ने अवसर नै थिएन। सबै टिम बलियो थियो, त्यही क्षमताको थियो,' पुर्जाले सुनाए।
टोली नेता पुर्जा जसरी पनि यो कीर्तिमान नेपालको नाममा ल्याउन चाहन्थे। त्यही आत्माविश्वास साथ टोलीसहित शिखरतिर उक्लिए। शिखर चुम्न दस मिटर बाँकी थियो। दसै जना एकठाउँ जम्मा भए। सबैले काँधमा काँध जोडे र राष्ट्रिय गीत गाउँदै शिखरतिर अघि बढे।
'हामी सबै दाजुभाइले उतिकै दुःख गरेका थियौं। त्यसरी काँधमा काँध जोडेर राष्ट्रिय गीत गाउँदै एकैचोटि शिखरमा उभिँदा निकै भावुक भएका थियौं,' पुर्जाले सम्झिए, 'मैले त वरिपरिको केही दृश्य हेरिनँ। एकदमै खुसी लागेको थियो। दाजुभाइ गड्याङगड्याङ गरेर हिँडेको छ, राष्ट्रिय गीत गाएको छ। क्षण भनेको त्यही थियो।'
Congratulations to the team & to Nepal.
? for the achievement and the superb attitude! pic.twitter.com/CLjx3Kf1s0
अर्का सदस्य मिङमाले थपे, 'हामी एकअर्काबीच प्रतिस्पर्धा भएको भए सायद असफल हुनसक्थ्यौं। कोही पहिलो, कोही दोस्रो भइन्थ्यो होला। तर त्यो क्षणले हामी सबैलाई पहिलो बनाउने अवसर भयो जुन निकै शक्तिशाली हो।'
केटु शिखरमा कीर्तिमानी पाइला टेक्दै, नेपाली राष्ट्रिय झन्डा फर्फराउँदै आरोही टोली आधार शिविर फर्कियो। शिविरबाटै पाकिस्तानी सरकारले उनीहरूलाई हेलिकप्टर चार्डट गरेर इस्लामावाद लग्यो। त्यहाँ उनीहरूलाई पाकिस्तानी राष्ट्रपति र सैनिक प्रमुखले भव्य स्वागत तथा बधाइ दिए।
'हामीले त्यति भव्य स्वागत हुन्छ भनेर सोचेकै थिएनौं,' पुर्जाले हाँस्दै भने, 'त्यसले गर्दा हाम्रो नेपाललाई पनि दबाब पर्‍यो जस्तो लाग्यो। नेपालमा पनि निकै राम्रो स्वागत भएको थियो।'
छोटो समयमा केटु आरोहण सफल पार्न खर्चको जोहोदेखि अन्य व्यवस्थापन निकै गाह्रो परेको पुर्जा सुनाउँछन्। उनले त्यसका लागि आफूले विदेशी ब्रान्डबाट कमाएको पैसा पनि खर्चेको बताए। पहिल्यै राम्रो आम्दानी र अवसर त्यागेर आएकाले आफूमा पैसाको लोभ नभएको उनी बताउँछन्।
निर्मल पुर्जा र मिङमा डेभिड शेर्पा। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
'म सधैं के भन्छु भने, भगवान् मलाई पैसादेखि लोभिने कहिल्यै नबनाइदिनुस्, किनकी म पहिल्यै राम्रो सुविधा र अवसर त्यागेर आएको मान्छे हो,' उनले गर्विलो भावमा भने, 'हामीले जे गर्‍यौं, त्यो देशको लागि हो, हाम्रा भावी सन्ततिका लागि हो।'
यो अभियानको सबै खर्च विदेशी ब्रान्डबाट आएको सहयोगबाट जुटाएको जानकारी दिँदै उनले नेपाल सरकारबाट कुनै सहयोग नआएकामा गुनासो पोखे।
'नेपालमा कोहीबाट सहयोग पाइएन,' पुर्जा भन्छन्, 'मेरो खर्च भएको आफ्नो पैसाले दुइटा घर बनाउन सक्थेँ। तर देशका लागि गर्नुपर्छ भनेर खर्च गर्‍यौं।'
यो कीर्तिमानले आफूहरूले विश्वमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको उनी बताउँछन्।
उनले भने, 'हामीले विश्वलाई एउटै सन्देश दिन चाह्यौं, त्यो भनेको 'इफ यू युनाइट, यू विल कन्क्योर, इफ यू डिभाइड वी फल'।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७, २३:३२:००